January 23, 2022 AdminLeaveaComment on याै,न रूचीमा चार समस्या, अधिकांश महिलाले जीवनको कुनै न कुनै विन्दुमा यौ,न पि,डा भोगेका हुन्छन् ।
यौ,न पहिले इच्छाबाट सुरु हुन्छ, यौ,न इच्छाले एराउजल (उ,त्तेजना) गराउँछ र त्यसपछि अग्र्याजम (चरमोत्कर्ष) मा पुर्याउँछ भन्ने विचार व्याप्त छ ।
पुरुषका हकमा यो कुरा स,त्य भए पनि महिलाका हकमा यसो नहुन सक्छ । महिलामा शारीरिक चाहनाबाटै यौ,नको सुरुवात नहुन सक्छ । यौ,नको शारीरिक चाहना यौ,न गतिविधि सुरु भएपछि मात्र पनि हुन सक्छ ।
धेरै महिलाले से,क्स गर्दा अग्र्या,जममा नपुगे पनि आफू सन्तु,ष्ट भएको बताउँछन् । यौ,न सम,स्या मुख्यतया चार प्रकारका हुन्छन्, यौ,न इच्छाको सम स्या, यौ,न उत्तेजनाको स,मस्या, सम्भोग सुखको सम,स्या र यौ,न पी,डाको स,मस्या ।
जब कुनै महिला कुनै पनि यौ,न गतिविधिमा संलग्न हुन चा,हन्नन्, उनलाई यौ,नको कल्प,ना या विचार आउँदैन भने उनमा यौ,न इ च्छाको स मस्या रहेको हुन्छ । यो चि,न्ताको विषय हो । यौ,न उत्तेजनाले शरीरमा भौतिक र भावनात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।
र,क्तचाप, मु टुको धड्कन, सास र शरीरको ता,पक्रम बढ्नु, स्तन र यो नीमा र,क्तप्रवाह बढ्नु र यो,नी चि प्लो हुनु तथा फु,ल्नु यौ,न उत्तेजनाका लक्षण हुन् । केहीकेही महिलामा यौ,न उत्तेजनाका यी संकेत देखिँदैनन् ।
सम्भोग सुखको अनुभव नभए पनि महिलालाई पुरुषको प्रेम र निकटताले स,न्तुष्टि दिन सक्छ । यौ,न सम्पर्क हुँदा महसुस हुने दु,खाइलाई यौ न पी,डा भनिन्छ । अधिकांश महिलाले जीवनको कुनै न कुनै विन्दुमा यौ,न पी डा भोगेका हुन्छन् ।
तर, यौ,न पी डा अ त्यधिक र सधैँ भएमा चिकि त्सकको सल्लाह आवश्यक हुन्छ । महिलामा यौ,न इच्छा जगाउन या बढाउन उनको प्रेमी या पतिसँग आ,त्मीय सम्बन्ध हुनुपर्छ । कुनै पनि समस्यामा खुलेर कुरा गर्नुपर्छ ।
सम्भोगमा भन्दा आ,त्मीयतामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । यौ,न ज्ञान र सम्भोग कला महिलाका यौ,न स,मस्या ह टाउन उपयोगी हुन्छन् विभिन्न स,म्भोग आसन प्रयोग गर्नु, पर्याप्त फोरप्ले गर्नु, तातो पानीले स्नान गर्नु,
स,म्भोगअघि पि,साब फेर्नु आदि उपाय अपनाएर सम्भोग पी,डा घटा,उन या ह,टाउन सकिन्छ । यी प्रयासहरूले यौ,न स,मस्या समाधान भएनन् भने चिकि,त्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ एजेन्सीकाे सहयाेगमा ।
नोट :Nepal viral news मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई Nepalviralnews@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
मलाई उस्ले जति मज्जा बुडाले पनि दिदैंन ! भिडियो सहित !
श्री’मा’नले मेरा इ”च्छा पु’रा गरेनन्…..अब म के गरौँ ?
बुडा बैदेसिक रोजगारमा बुडी काका पर्ने संग मस्ती ! भिडियो भयो भाइरल भिडियोको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस !
केटीहरु को कति से,क्सी ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस् …..